LGBT အခွင့်အရေးတောင်းဆိုတာက ခွဲခြားမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တားဆီးရန် လိုအပ်လို့ အထူးတောင်းဆိုတာပါ ဆိုတဲ့ ဦးအောင်မျိုးမင်း | Colors Rainbow
August 30, 2018 August 31, 2018 Kyal Sin Lin 1334 Views0Comments LGBT – To be Prohibited or Protected ?	min read
LGBT အခွင့်အရေးတောင်းဆိုတာက လူသားတွေရရှိပြီးသား အခွင့်အရေးကို ပိုတောင်းဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ LGBT တွေအပေါ် ခွဲခြားမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တားဆီးရန် လိုအပ်လို့ အထူးတောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ Equality Myanmar ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ရှိ Wilson Hotel မှာ သြဂုတ်လ(၂၆)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ LGBT – To be Prohibited or Protected? A Legal Perspective on LGBT Rights in Myanmar ဆွေးနွေးပွဲမှာ ယခုလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“LGBT လူနည်းစုတွေက လူသားတွေ ရထားပြီးသား အခွင့်အရေးကို ပိုတောင်းတာမဟုတ်ဘဲ လူတွေ ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လူသားတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပိုဒ်(၃၀)ကိုပဲ တန်းတူရအောင် တောင်းတာပါ။ LGBT ဖြစ်တာကြောင့် သူများတွေ ရတာထက် ပိုတောင်းဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူး။ တောင်းစရာလည်း မလိုဘူး။ ဘာလို့တောင်းလဲဆိုရင် မိသားစုထဲမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ကျောင်းတွေ အလုပ်ရုံတွေမှာ ခွဲခြားမှုတွေ၊ ပတ် ဝန်းကျင်က တော်ရဲ့သားနဲ့ အသိအမှတ်မပြုမှုတွေ အထင်သေးမှုတွေကို ထွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက် တန်းတူ ပညာရေး၊ တန်းတူ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို တောင်းတာပါ” လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီလို အခွင့်အရေးတွေထဲကမှ Special Protection ကို အထူးတောင်းဆိုထားတာ ရှိပြီး ၎င်းက LGBT တွေ သွားလာတဲ့အခါ မလုံခြုံအောင်ဖြစ်နေတဲ့ တရားမဲ့ ရိုက်နှက်မှုတွေကို တားဆီးရန် တောင်းဆိုထားခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လက်ရှိ ပြဿနာက ရဲအက် (၃၅)က ရုပ်ဖျက် သွားလာတာတွေ တွေ့တဲ့အချိန်၊ အကြောင်းမပြနိုင်တာတွေ တွေ့တဲ့အချိန် ဆွဲခံရတာရှိတယ်။ အမျိုးသမီးပုံစံဝတ်ပြီး ည ၉နာရီလောက်မှာ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲ ထွက်ထွက် ရဲက ကောက်ဖမ်းလိုက်တာပဲ။ ရဲကလည်း အမှုပြီးချင်လို့ ဝန်ခံခိုင်းတာတွေ ရှိတယ်။ အဲမှာ လှိမ့်ခံရတာပဲ။ Gay ကလည်း လူပဲလေ ။ ရဲဥပဒေ ၃၅ ကိုလည်း ဖျက်လို့မရဘူး။ ဖျက်တာကို ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ရဲတွေက Gay တွေအပေါ်မှာ အမြင်ပြောင်းဖို့ လိုလာပြီ။ ဒီဘက်ကလည်း ကာကွယ်ဖို့ ပြောသလို Gay တွေဘက်ကလည်း ထိန်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ညဘက် အချိန်မတော် ထွက်တာကိုလည်း မထွက်စေချင်ဘူး။ ရဲ့ကလည်း မဟုတ်တယုတ် မလုပ်စေချင်ဘူး”လို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာ (မန္တလေး)၊ တရားလွတ်တော် ရှေ့နေ ဦးထိန်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ထိုပြင် ဦးအောင်မျိုးမင်းကလည်း လက်ရှိ ဥပဒေတွေသည် ယခင်ဗြိတိသျှခေတ်က ဥပဒေတွေ အများအပြားပါဝင်နေပြီး ၎င်းဥပဒေတွေကို ပြန်ကြည့်ပါက လူထုကို ချုပ်နှောင်ဖို့ ဥပဒေတွေသာ ဖြစ်နေသလို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ များနေတာကြောင့် လိုရာဆွဲနိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ များစွာပါဝင်နေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေရဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေမှာ ခေတ်နဲ့မညီတာတွေကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
“၃၇၇ ကို ဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်သော ဆိုတာက ယောကျ်ား ယောကျ်ားခြင်း လိင်ဆက်ဆံတာကိုပဲ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြိုက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ဝင်နိုင်တယ်။ မိန်းမချင်းလည်း အကျုံးဝင်နိုင်တယ်။ ယောကျ်ားနဲ့ မိန်းမတောင် အတတ်ဆန်းရင် ဝင်နိုင်တယ်။ အဲလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဖွင့်ပြီး ဒီနေရာမှာ လူ့အခွင့်အရေးအဓိပ္ပါယ်ကို အစားထိုးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ရင် ဥပဒေအရ အရေးယူပါ။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေအရ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လိုလို့၊ ထင်လို့၊ အမြင်ကပ်လို့၊ မုန်းလို့၊ လုပ်စရာမရှိလို့ ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုး မဖြစ်စေဖို့၊ ဥပဒေတွေထဲမှာ အစွဲတွေ မပါဖို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်တွေကို တိတိကျကျ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးဖို့ လိုပါတယ်” လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ထပ်မံပြောပါတယ်။
Colors Rainbow အဖွဲ့မှ လက်ထောက် ဒါရိုက်တာ ဦးလှမြတ်ထွန်းကလည်း လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းလဲဖို့ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံအရ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တခြားနိုင်ငံကထက် အမြင်ကျယ်တာကို တွေ့ရှိရပြီး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဥပဒေအကြောင်း ခြေခြေမြစ်မြစ် သိရှိလာတဲ့အခါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတယ်လို့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲမှာ LGBT တွေက ဘာကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ခံစားခွင့်ရှိတာလဲ၊ LGBT အခွင့်အရေးတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ အခွင့်အရေးသာမက LGBT တွေအနေနဲ့လည်း တာဝန်ရှိမှု ၊တာဝန်သိမှုတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့် သလဲ ၊မြန်မာပြည်မှာ LGBT တွေအတွက် ပညာပေးတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်သင့်သလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
← မိန်းမလျာပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့ရမယ့် ပြေတီဦး ပါဝင်ထားတဲ့ Lady Boy ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာခင် ရိုက်ကူးမည်
ပုသိမ်မြို့မှာ Transgender အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဓါးနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ အထိုးခံရမှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး →
August 13, 2018 Kyal Sin Lin 1
March 22, 2019 Kyal Sin Lin 0